...... far away from SwitchYard
Photo Collection:One Evening at Pashupatinath
Pashupatinath Temple at Evening
the safest place on the Earth-its mother's back....... #monkey #pashupatinath
जन्मिनासाथ नै मृत्‍युको रिटर्न टिकट काटिसकेको हुन्छ मान्छे, तैपनी रिश राग र घमन्ड किन गर्छ मान्छे??
चप्पल र मान्छे एउटै हो एउटा साथी चाहिन्छ हजारौ कोश सजिलै पार हुन्छ...
Performing Shiva Tandav Strutam at Pashupatinath
#sadhu #baba #meditation #ashupatnath #Nepal
बाजुन्जेल मात्र होइन अन्तिम क्षणमा समेत साथी खोज्दो रैछ् मान्छे, शायद संगै स्वर्ग/नर्क जानलाई होला
Posted by Trilochan Bhattarai at 8:48 PM No comments:
काठमाडौं साच्चिकै एक अमुर्त शहर ! हरेक मानिसले यसलाई आफ्नै भोगाइ र सोचाइ अनुसार बर्णन गर्न सक्छन् । एउटा ब्यापारी जब पहिलोपटक काठमाडौं उपत्यका छिर्छ उसले नागढुङा उकालोबाट नै उपत्यकाको खाल्डोमा पैसाको खोलो बगिरहेको देख्छ र त्यही पैसा बटुलेर त्यही खाल्डोमा सपनाको महल बनाउने उपाय रची सकेको हुन्छ । जब कुनै विद्यार्थी पढ्नको लागि राजधानी छिर्छ उसका सुरुका केही दिन त यहाँका रँगी चँगी बिद्यालयका बिल्डिङहरु हेरेरै बित्छ । पिठ्युमा किताबभन्दा गरुँगा बाबु आमाको सपना बोकेर बिद्यालय जादै गरेका केटाकेटी देख्दा उस्लाई पनि कती रहर लाग्दो हो । तर बिस्तारै आफ्नो बा आमाको कमाइले उस्को किताब किन्ने पैसो पनि जुट्दैन भन्ने कटु सत्य थाहा पाउछ बिस्तारै आफ्नो सपनाको दायरा खुम्चाउदै जान्छ । अनी केही दिनमा यो पनि बुझिसकेको हुन्छ कि गाउमा चर्चाको बिषय बनेको उस्को परिक्षाको प्राप्ताँक यहाँका धेरैजसो बोर्डिङहरुमा भर्ना हुनासाथ स्किमको रुपमा बाँडिएको हुन्छ ।
कसैले रहररहर त कसैले गिद्दैगिद्दैको शहरसँग दाजेको यस् राजधानिमा जब कुनै ब्यक्ती जागिर पाउने आशामा छिर्छ सुरुसुरुमा त यहाँको भिड छिचोल्न नसकेरै ऊ निस्सासिन्छ । एकले अर्कालाई लखेटिरहेको जस्तो देखिने मानिसहरुको दौडधुपलाई देख्दा ऊ ठान्दो हो कि सबै आ आफ्नो काम धन्दामा जान हतार गरिरहेका छन । तर बिस्तारै बिस्तारै जब ऊ आफु पनि यही अस्तब्यस्त म्याराथूनमा सहभागि हुन थाल्छ तबसम्म उस्ले बुझिसकेको हुन्छ कि यो हस्याङ फस्याङमा जारिरे भन्दा ऊजस्तै बेरोजागारहरुकै सँख्या बढि छ र यसलाई जितेर अघी बढ्न उस्ले यहाँको नियम उल्लङ्घन गर्नै पर्छ ।
शायद ४-५ कक्षातिरको कुरो हो । मेरो नेपाली भन्ने किताबमा एउटा पाठ थियो जस्मा एउटा विद्यार्थीको काठमाडौं यात्राबारे दैनिकिको रुपमा लेखिएको थियो । त्यो पाठ पढ्नासाथ काठमाडौंको एउटा चित्र मनस्पटलमा बनिसकेको थियो । अनी त्यो पात्रले झै एउटा चिटिक्कको डायरी किनेर काठमाडौं घुमेका कुराहरु लेखुला भनेर पनि सोचेको थिए होला शायद । त्यतिबेला एक रत्तिपनी सोचेको थिएन कि काठमाडौंमा यत्तिका बर्ष बिताइन्छ भनेर तर भबिश्य त्यो बेलाको सानो मस्तिश्कले सोचेको जस्तो कहाँ हुदो रैछ् र । परिस्थिती , अवसर र नियती यि तीन कुरामध्ये कुनै एउटाले पनि साथ नदिएको भए अहिलेपनी म चितवनको कुनै अफिसमा काठमाडौं कती चोटि पुगे भनेर औंला भाच्दै गनिरहेको हुन्थे होला । तर "दुर्भाग्यबश" तिनै कुराले साथ दिएछन । एस् एल सि सकिनासाथ काठमाडौं छिरेको अहिले करीब नौ बर्ष पनि बितिसक्यो । मोटो गाता भाको चिटिक्कको डायरि त किनिसके तर राम्रा कुराले रँगीने मौका भने डायरिले अझै पाएको छैन ।
राजधानी शहरलाई बर्णन गर्न मान्छेहरुले धेरै शब्द खर्च गरिसके ।
धुलो , धुवा , फोहोर मैला र जामको बारेमा त अब कसैले लेख्यो भने पनि कस्तो पुरानो कुरा लेख्यो जस्तो लाग्न थालिसक्यो । जतिसुकै नराम्रो कुराहरुको पर्याबाची भएपनी समय ब्यतित गर्न भने यहाँ त्यती गाह्रो छैन । रत्नपार्क भित्र बौध्दिकतादेखी शरीरसम्म किनबेच गर्नेहरुको कलाकारिता हेर्ने हो भने पनि २-४ दिन राम्रैसँग बिताउन सकिन्छ । अझै आकाशेपुलमा उभिएर सडकपेटिमा तछाड् मछाड् गरिरहेका भिडमा आफुजस्तै टोलाइरहेका मान्छे गन्ने हो भने त दिन बितेको पत्तै हुँदैन ।
Posted by Trilochan Bhattarai at 6:49 PM No comments:
#Electrical #Engineer #Photography #EnergySystemPlanning&Management #MSc #PulchowkCampus #IOE #Nepal
काठमाडौं साच्चिकै एक अमुर्त शहर ! हरेक मानिसले यसलाई आफ्नै भोगाइ र सोचाइ अनुसार बर्णन गर्न सक्छन् । एउटा ब्यापारी जब पहिलोपटक क...
टि भि , रेडियो र फेसबूकका भित्ताहरु सबै एस.एल.सी को रिजल्ट आएको खबर फैलाइरहेका थिए । कम्प्युटर अगाडि बसेर रमाइरहेका मेरा आँखा अगाडि एकाएक...
३ दिने बन्दको दोस्रो दिन । आदिबासी जनजाती संयुक्त संघर्ष सामितिले जातिय पहीचानसहितको राज्यको माग राख्दै गरेको बन्दले मुलुकभरको जनजीवन कष्...
तबसम्म देश बन्दैन
ट्विटरमा कहिलेकाही गम्भिर बिषयमा पनि रमाइलो तरिकाले बहश हुने गर्दछ । कती कुरा मात्र रमाइलो गर्नका लागि लेखिन्छ भने कती कुरा साच्चिकै चित्...
करीब ३ बर्ष अघी पहिलो ट्विट् " nothing..... " लेखेर सुरुवात गरेको ट्विटर् यात्रा मा आजसम्म करीब ३ हजार ट्वीट्स् पुग्न आटेछ । यो ३...
like n recommend it